Inhloko ZeNdaba Ntulikazi 20, 2020
Ntulikazi 20, 2020
Sebeyinkulungwane eyodwa lamakhulu edlula ayisithupha-1,611, asebetholakale beleCovid 19, lokhu laqhamukayo eZimbabwe. Leli nani likhuphulwe ngabanthu abedlula ikhulu-133, abahlolwe batholakala belegcikwane leli ngokutshona kwelanga layizolo.
Izisebenzi zikaHulumende seziqale ukuthola imali yazo ngedola leMelika emabhanga kodwa azikabi lolwazi lokuthi limali izasebenza njani.
Uzulu weZimbabwe uthi usehlalela evalweni ngemibiko esiphuma yokuqansa kwenani labahlolwa betholakala belegciwane le Covid-19 kungaziwa lapho abalithelelwe khona njengoba bengazange baphume elizwe osekuphica labezempilakahle.
Inhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu, eye Zimbabwe Football Association ithi eyinye imali abayiphiwe ukuze iphathise ngemva kokuphazamiseka komdlalo lo, sekuqhamuke umkhuhlane we Covid 19 izasetshenziswa ngamaqembu amela ilizwe, emidlalweni lamanye amazwe.
Ku Livetalk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yikuqhamuka kweCovid 19 ngesikhathi inani lasebetholakala belegcikwane leli liqansa eZimbabwe.
Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi - 001 202 465 0318…
Abafisa ukulalalela kumsakazo we Studio7, lilakho ukusithola ngohalf past 7 ntambama kumagagase athi 909 am 4930; 6040, laku 15460 Kilohertz kuShort Wave nsuku zonke.